Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0712 lat
Ny sitrapon'Andriamanitra : Ny fahamasinana (1Tes. 4:3)
Alatsinainy 13 Aog.
Tsangan-kevitra feno ny 1 Tes. 4:3–8. Ny sitrapon’Andriamanitra ho an’ireo Tesalônianina tsirairay dia ny “fahamasinana” na “fanamasinana” (1 Tes. 4:3, 4, 7). Hazavain’i Paoly amin’ny alalan’ny fehezanteny roa ny tiany hambara eto amin’ny hoe fahamasinana. Ny mpino tsirairay dia antsoina mba “hifady ny fijangajangana” sy “hifehy ny fanaky ny tenany” (1 Tes. 4:3, 4). Fehezin’i Paoly amin’ny alalan’ny fanomezany antony telo manosika ho amin’ny fiainam-pahamasinana (1 Tes. 4:6–8) io tsangan-kevitra io: (1) Andriamanitra no mamaly ny amin’izany zavatra izany, (2) miantso antsika ho amin’ny fahamasinana Izy, ary (3) manome antsika ny Fanahy Masina Izy mba hanampy antsika. Hodinihintsika akaiky kokoa io andalan-teny io ao amin’ny fizaràna anio sy ao amin’ireo fizarana roa manaraka.
Vakio ny 1 Tes. 4:3 sy 4:7. Inona no fifandraisana misy eo amin’ireo andininy roa ireo? Inona no hafatra fototra raketin’izy ireo, ary nahoana no sahaza ho antsika ankehitriny izany?
Ny and. 3 dia miorina amin’ny and. 1, izay ahitana ny fampahatsiahivan’i Paoly ny Tesalônianina fa izy ireo dia nantsoina “handeha” – na “hiaina” araka ny dikan-teny maro – izay foto-kevitra hebreo nampiasaina hanoritsoritana ny fitondrantena ara-môraly sy ara-etika andavanandro. Eo amin’ny and. 3 izy dia mampiasa foto-kevitra hebreo iray hafa mba hanoritsoritana ny fiainana ara-panahy sy ny fitomboana ara-panahy, dia “ny fahamasinana” na ny “fanamasinana” izany.
Ny famaritana tsotra ny fahamasinana dia ny hoe “voatokana mba hampiasaina amin’ny asa masina.” Kanefa omen’i Paoly heviny voafaritra kokoa io teny io ao amin’ity taratasy nosoratany ity. Ny fahamasinana dia ny toetra ananan’ireo Tesalônianina amin’ny fiverenan’i Jesôsy (1 Tes. 3:13). Ao amin’ny toko 4 dia nosafidin’i Paoly ny fotokevitra izay manasongadina ny dingana fa tsy ny vokatra. Asa no resahina: ny hoe “manamasina” no tena avoitra, fa tsy ny vokatra, dia ny “fahamasinana.” Sitrapon’Andriamanitra ny hanarahantsika io dingana io (1 Tes. 4:3).
Tsy hoe filazantsara tsy misy lalàna no tohanan’i Paoly. Misy ireo zavatra takina eo amin’ny ara-pitondran-tena ho an’ireo izay ao amin’i Kristy. Voalaza eo amin’ny and. 7 fa ny “fahalotoana” no mifanohitra amin’ny “fahamasinana”. Tohizan’i Paoly ny fanazavany ny and. 3: “hifadianareo ny fijangajangana” (1 Tes. 4:3). Ny teny ilazana ny hoe “fijangajangana” eto dia ny teny grika hoe “proneia”, izay mahafaoka – amin’izao vaninandro iainantsika izao – ireo endrika faharatsiam-pitondran-tena rehetra eo amin’ny lafiny firaisana ara-nofo, hatramin’ny sary mamoafady sy ny fivarotan-tena, ka hatramin’ny fihetsika rehetra mifandraika amin’ny firaisana ara-nofo ivelan’ny fanambadiana.
Marina fa ny famonjena dia amin’ny alalan’ny fahasoavan’ Andriamanitra ary raisina amin’ny alalan’ny finoana, kanefa ny fiainana kristianina dia tokony ho fiainampitomboana, tokony ho fiainam-piezahana mitohy hanatratra ny fahatanterahana izay nampanantenaina ho antsika ao amin’i Kristy.
Porofo lehibe maneho ny fitiavan’Andriamanitra antsika ny nanomezana antsika ny firaisana ara-nofo. Kanefa nosimbana loatra io fanomezana io ka zary ozona izany ho an’ny maro, zary antony mahatonga fahoriana sy alahelo lehibe. Inona no safidy azontsika atao mba hahafahantsika miaro tena amin’ny voka-dratsy mety hateraky ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy io fanomezana io?